Xa Umntwana Wakho Ebuza Ngokufa | Ukunceda Iintsapho
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCibemba IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Umntwana wakho oneminyaka emithandathu uyakubuza, “Uza kufa ngeny’ imini?” Wothukile, uyazibuza: ‘Akamncincanga kakhulu na lo mntwana ukuba angayiva impendulo yalo mbuzo? Ndingamcacisela njani ngokufa?’
Abantwana bakhe bacinge ngokufa. Abanye bade badlale imidlalo apho omnye ezenza ngathi ufile. Ngoko, ukufa akumele kube yinto ekungathethwayo ngayo yaye ufanele uyiphendule nayiphi na imibuzo ebuzwa ngumntwana wakho ngokufa. Ngokumane uthetha nomntwana wakho ngako, uya kumnceda anyamezele intlungu yokufelwa ngumntu amthandayo.
Ukuthetha ngokufa akuzi kumenza abe neengcinga ezoyikekayo umntwana wakho. Kunoko, kuya kumnceda ayeke ukoyika. Ewe kona, kusenokufuneka uyilungise indlela azibona ngayo ezinye izinto. Ngokomzekelo ezinye iingcali zithi abantwana abaninzi abangaphantsi kweminyaka emithandathu bacinga ukuba umntu akafi ngokupheleleyo. Xa bedlala, umntwana “uyafa” aze aphinde “avuke” kwangoko.
Noko ke, xa abantwana bekhula, baye bakuqonde ukuba kuthetha ukuthini ukufa—nto leyo eyenza babe nemibuzo, baxhalabe okanye bade boyike ingakumbi xa kufe umntu abamthandayo. Ngoko kubalulekile ukuba uthethe nabo ngale nto. Ugqirha wengqondo uMarion Haza uthi: “Ukuba umntwana uzibona engavumelekanga ukuba athethe ngokufa ekhaya uye akoyike nangakumbi.”
Ungade uzixhalabise kakhulu ngento omele uyithethe. Olunye uphando lubonisa ukuba abantwana bafuna nje “ukuxelelwa inyani ngamazwi obubele.” Yazi ukuba umntwana akafane ayibuze into xa angekakulungeli ukuva impendulo yayo.
Wasebenzise amathuba avelayo okuthetha ngokufa. Ukuba umntwana wakho ubona intaka efileyo okanye inja yakhe iyafa, sebenzisa nje imibuzo elula yokumenza athethe. Ngokomzekelo unokumbuza: “Ucinga ukuba isilwanyana esifileyo siyaziva iintlungu? Ucinga ukuba siyalamba okanye sigodole? Ubona njani xa isilwanyana okanye umntu eswelekile?”—Umgaqo weBhayibhile: INtshumayeli 3:1, 7.
Musa ukuyifihla inyani. Xa kusweleka umhlobo okanye isalamane, kuphephe ukuthetha ngendlela engacacanga njengokuthi “Usishiyile.” Umntwana wakho usenokucinga ukuba lo mntu useza kuphinda abuye. Kunoko sebenzisa amazwi alula nangqalileyo. Ngokomzekelo usenokuthi: “Ngoku uMakhulu ebesweleka umzimba wakhe uye wayeka ukusebenza. Asinakukwazi ukuthetha naye, kodwa siya kuhlala simkhumbula.”—Umgaqo weBhayibhile: Efese 4:25.
Umntwana usenokucinga ukuba ukufa kuyosulela, ngoko mqinisekise ukuba akukho nto iza kwenzeka kuye.
Mqinisekise umntwana wakho. Umntwana usenokucinga ukuba nguye obulele lo mntu, ngezenzo okanye ngeengcinga zakhe. Endaweni yokumxelela nje ukuba akukho nto ayenzileyo, usenokumbuza, “Yintoni ekwenza ucinge ukuba lo mntu ufe ngenxa yakho?” Mmamele kakuhle, ungayijongeli phantsi indlela avakalelwa ngayo. Umntwana usenokucinga ukuba ukufa kuyosulela, ngoko mqinisekise ukuba akukho nto iza kwenzeka kuye.
Menze akhululeke. Mbalisele nje ngokukhululekileyo ngabantu obathandayo abaswelekayo, mbalisele nangezalamane angazaziyo. Usenokumncokolela ngamabali ahlekisayo owakhumbulayo kamalume, umakazi, okanye umakhulu notamkhulu. Xa ubalisa ngokukhululeke ngolo hlobo, nomntwana wakho uya kutsho abone ukuba akukho nto imbi ngokuthetha okanye ngokucinga ngabo bantu. Kodwa qiniseka ukuba awumnyanzeli umntwana wakho ukuba athethe. Usenokulinda kuvele elinye ithuba elifanelekileyo lokuphinda uthethe naye ngale nto.—Umgaqo weBhayibhile: IMizekeliso 20:5.
Isahluko 34 no-35 sencwadi ethi Funda KuMfundisi Omkhulu singamnceda umntwana wakho azi oko kufundiswa yiBhayibhile ngokufa. Khangela phantsi kwendawo ethi IIMPAPASHO > IINCWADI NEENCWADANA EZINEMIFANEKISO ZOKUFUNDA IBHAYIBHILE
“Kukho ixesha lokuthi cwaka nexesha lokuthetha.”—INtshumayeli 3:1, 7.
“Ngamnye kuni makathethe inyaniso.”—Efese 4:25.
“Icebo entliziyweni yomntu linjengamanzi anzulu, kodwa umntu wokuqonda ulitsala linyuke.”—IMizekeliso 20:5.
IZINTO EZIBALULEKILEYO OMELE UTHETHE NGAZO
Xa kusweleke umntu enimthandayo, ungamnceda umntwana wakho angakoyiki ngokugqithiseleyo ukufa ngokuqiniseka ukuba uziqonda kakuhle ezi zinto zilandelayo:
Nokuba wena ungehlelwa yintoni na, akasoze abe yinkedama, izalamane zakho ziya kumnyamekela.
Xa umntu eswelekile akaseva ntlungu.
Lo mntu uswelekileyo akazi kulityalwa. Usenokuthi: “Nakuba ungasenakumbona uMakhulu, kulungile ukumcinga nokumkhumbula.”
Khumbula ukuba ukungathethi nomntwana wakho ngezi zinto akuzi kumnceda angabi naxhala. Kunoko, kusenokumenza abe neengcinga ezimoyikisayo.
Ukukhulisa Abantwana Umtshato Nentsapho Xa Wehlelwe Yinto Ebuhlungu Uxolo Nolonwabo
Text Iimpapasho onokuzikhuphela UVUKANI! Februwari 2015 | Ngaba IBhayibhile Iluncedo Namhlanje?